Zimbabwe – HaHu Daily Ethiopian News
Zimbabwe’s 37 years President Robert Mugabe resigns – Live Updates
Zimbabwe’s 93-year-old President Robert Mugabe has finally resigned on Tuesday, 21st Nov 2017, a day after the army and his own political party decided to impeach him. Zimbabwe’s parliament speaker Jacob Mudenda announced the letter from Mr Mugabe that indicates the decision of resignation was voluntary and that Mugabe had made it to …
Zimbabwe’s Mugabe to face impeachment as deadline to resign passes
November 20, 2017	Africa 0
Zimbabwe’s ruling party, Zanu-PF, has decided to impeach President Robert Mugabe after a deadline for his resignation passed on Monday. The party has already called its MPs to discuss on the process of impeachment. In its official Twitter account, the ruling party announced that “proposed vote of no confidence in president Mugabe” …
Zimbabwe: What really happened in Harare, Military coup? Live Updates
November 15, 2017	Africa 0
Yesterday, 14th November 2017, few tanks was heading towards capital Harare that sparked rumours of military coup. Early morning today, 15th November 2017, Zimbabwe’s military took of state broadcaster and the military’s spokesman Maj Gen SB Moyo said that the military has seized power to target “criminals” around President Robert Mugabe, …